Banaanbax lagu taageerayo jawaabtii dowlada Turkiga ay ka bixisay isku-daygii afgembiga fashilmay oo ka dhacay magaalada Istanbul - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBanaanbax lagu taageerayo jawaabtii dowlada Turkiga ay ka bixisay isku-daygii afgembiga fashilmay oo ka dhacay magaalada Istanbul
August 7, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Ku dhawaad saddex milyan oo shacab ah oo banaanbax lagu taageerayo dowlada Turkiga ka sameeyay magaalada Istanbul. Sawirka: EPA.
Istanbul-(Puntland Mirror) Banaanbax weyn oo lagu taageerayo jawaabti Turkiga ka bixiyay isku-daygii afgembiga fashilmay ayaa lagu qabtay magaalada Istanbul, waxaana si wadajir ah uga qaybgalay madaxweynaha, raysulwasaaraha iyo labo hoggaamiye oo kamid ah ururada mucaaradka ah.
Dad lagu qiyaasay saddex milyan, oo ruxayay calanka dalka Turkiga, ayaa ka qaybgalay banaanbaxa dhacay maanta oo Axad ah.
“Waa banaanbax dimuqraadiyad iyo dadkii shahiiday, waxay la macno tahay in dalkeena midaysanyahay,” ayuu yiri Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan isagoo ka codsaday dadka ka qaybgalay in ay haystaan calanka Turkiga oo kaliya.
“Waa in aynu u istaagnaa si wadajir ah oo hal qaran oo kaliya ah, hal calan, hal dal oo hooyo, hal dowlad, hal naf,” ayuu ku daray Madaxweyne Erdogan.
Banaanbaxyo kan lamid ah ayaa ka dhacay qaybaha kale ee dalka Turkiga.
Isku-daygii afgembiga fashilmay ee ka dhacay Turkiga 15-kii bishii July, 2016, ayaa waxaa ku dhintay dad ku dhow 270 qof.
August 21, 2016 Qarax xaflad aroos u badalay murugo, ugu yaraan 30 qof oo ku dhimatay qaraxa oo ka dhacay Turkiga